AirSnap Twill oo ka timid laba iyo toban Koonfurta, waxaan tijaabinay kiiska ugu caansan ee AirPods | Wararka IPhone
AirSnap Twill oo ka socota Twelve South, waxaan tijaabinay kiiska AirPods ee ugu caansan
Miguel Hernández | | Qalabka IPhone, iPhone
Laba iyo toban South waa shirkad u heellan qalab tayo leh, guud ahaan ka samaysan maqaar, oo loogu talagalay alaabtayada tufaaxa, laga soo bilaabo Mac illaa AirPods. Maaha markii ugu horreysay ee aan gacanta ku hayno wax soo saar ka socda shirkaddan, Waxaan horey u falanqeynay dabool aad ugu eg kan tan laakiin laga sameeyay maqaar. Markan waxaan ku raaxeysaneynaa kiiska cusub ee Laba iyo Tobanka Koonfurta AirSnap ee loogu talagalay AirPod-kaaga, tayada ugu badan, naqshadeynta iyo iswaafajinta qiimaha Qi. Ha seegin falanqayntayada faahfaahsan ee waxa noqon kara mid ka mid ah qalabka ugu fiican suuqa ee loogu talagalay dhagahaaga dhagaha ee wireless-ka ah ee shirkadda Cupertino.
Xusuusnow marka hore in daboolkan si toos ah loo iibsan karo gudaha Laba iyo toban websaydh Koonfurta ah oo ka socda .34,99 XNUMX oo lagu daray kharashka dhoofinta u dhiganta waddanka aad degan tahay, ama sharad ku dhig Amazon, halkaas oo summaddu ay dhowaan kiiska ku iibinayso isla € 34,99In kasta oo aad keydin karto qarashka dhoofinta oo aad guriga ku heysato 24 saac gudahood haddii aad haysato rukunka 'Amazon Prime', dhanka kale, waxaad sidoo kale fiirin kartaa nooca maqaarkeeda ama inta kale ee kaabayaasha ah ee loo heli karo dhammaan aaladaha Apple guud ahaan.
1 Naqshadeynta iyo qalabka: Tayada had iyo jeer
2 Kuu ogolaanayaa xukun wireless oo raaxo leh in la isticmaalo
Naqshadeynta iyo qalabka: Tayada had iyo jeer
Hadday wax uun ku faani karaan Laba iyo toban South waa si sax ah tayada dhismaha iyo daryeelka qaabeynta. Kiisaska AirPods waa inay ahaadaan kuwo jilicsan iyo sidoo kale difaac, dheelitir adag oo lagu gaaro. Xaaladdan oo kale, AirSnap-ka cusub waxaa loo sameeyaa sida inta kale, maqaarka, hase yeeshe waxay leedahay daahan dhar ah oo ka dhigaya mid u adkeysanaya wasakhda, waxay u baahan tahay daryeel yar waxayna leedahay muuqaal aan caadi ahayn. AirSnap Twill-ka cusub waxaa lagu gadan karaa laba midab: Qiiq iyo Fog. Iyagu waa laba nooc oo dhar cawl ah.
Cabbiraaduhu waa dhexdhexaad sida loo fahmi karo kiis AirPods, waxaan leenahay 75 x 53 x 25 milimitir cabir ahaan wadar ahaan 22 garaam markay madhan tahay. Waxaan leenahay jillaab korka ah si aan ugu adeegsanno furaha furaha, ku qabanno boorsada dhabarka ama meel kasta oo aan u aragno inay habboon tahay. Xiritaanka waxaa lagu sameeyay muraayad bir ah oo madow meesha ay ka muuqato astaanta laba iyo tobanka Koofureed. Dhinaca kale, lGunta hoose ayaa leh furitaanka saxda ah ee isku xidhka danabka ee AirPods sidaasna waxay noo oggolaan doontaa inaan si fudud uga qaadno.
Kuu ogolaanayaa xukun wireless oo raaxo leh in la isticmaalo
Markii hore waxaan adeegsan jiray maqaarka AirSnap sidoo kale laga soo bilaabo Twelve South, markaa waxaan safar kuhayaa kiiskan oo kale, nasiib daro waan joojiyay isticmaalkeeda fasaxan natiijaduna waxay noqotay mid masiibo ah, haa, waan lumiyay AirPod-kayga. Munaasabaddan waxaan ku duubay midabkan AirSnap Twill Smoke lammaanaha kale ee AirPods ah ee aan ku haysto guriga oo aan rajeynayo inaanan lumin. Furitaanka daboolka waa fududahay, kuma furmayo si qalad ah ama uskag ayaa ku soo galaya, sida booska danabku u leeyahay saxnaan sax ah.
Waa in la ogaadaa in kiiskani uu noo ogolaanayo inaan ka faa'iideysano xukunka wireless-ka ee jiilka labaad ee AirPods iyada oo aan loo baahnayn in laga saaro kiiska. AirSnap nooc kasta oo ka mid ah noocyadiisa ayaa noo oggolaanaya inaan ka qaadno jiilka labaad ee AirPods iyada oo aan laga saarin, tani waa mid raaxo leh waxayna hubineysaa in sanduuqa dhagaha uusan la kulmi doonin dhar aan loo baahnayn sababtoo ah daboolka oo si joogto ah loo dhigo.
Qalab tayo sare leh iyo qaabeyn
Iswaafajin buuxda oo Qi iyo danab ah
Waxay leedahay nidaam ka hortagga khasaaro iyo xiritaan wanaagsan
Way ku fiican tahay dadka isticmaala qaarkood
Nidaamka xiritaanka ayaa ka sii fiicnaan lahaa haddii la magnetized lahaa
Sidii aan horey u soo sheegnay, qiimaha rasmiga ah ee nooc kasta oo ka mid ah noocyada AirSnap, labadaba Leather iyo Twill oo ka kala socda Twelve South waa 34,99 euro, labadoodaba waad ka iibsan kartaa kooda web rasmi ah iyada oo loo marayo Amazon runtiina waxay bixiyaan isku dheelitirnaan layaableh oo udhaxeysa tayada, qaabeynta iyo shaqeynta. Haddii aad ka fekereyso in AirPod-yadaadu ay ku xirnaadaan kiis sababo la xiriira badbaadin ama wax ku ool ah, Twelve South AirSnap waa ikhtiyaar shaqsiyan aniga u arkaa inuu igu qanco.
Laba iyo toban South AirSnap Twill Case oo loogu talagalay AirPods
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirSnap Twill oo ka socota Twelve South, waxaan tijaabinay kiiska AirPods ee ugu caansan
Ma qorsheyneysay inaad iibsato buugga 'Naqshadeeyay Apple ee California'? Apple ayaa ka saaraysa dukaamadiisa
Powerbeats Pro waxaa hadda lagu heli karaa midabada Ivory, Moss iyo Navy